Tahak'izay aho mba ratsy fanahy
Fiainana — Nampidirin'i fraz @ 23:23
Nisedra olana kely izahay satria nisy nangalatra ny piesy sasan-tsasany amin'ny fiara (kodiarana, seza, ary jiro aloha). Dia lasa moa izany nandeha nankany amin'ny polisy (izay no tao an-tsaina voalohany) nanao déclaration dia sady nanontany an-dry zareo hoe inona no tokony atao avy eo. Antsoy hoy izy ny assurance-nareo.
Dia niantso ny assurance satria hoe misy assurance contre le vol tsinona ilay izy. Tsy misy problème hoy ry zareo fa misy franchise aloha kely fotsiny ka antsoy ny mondial assistance hanao remorquage ny fiara dia ateriny any @ garage agrée amin'ilay assurance avy eo dia miandry ny expert hanao constatation sy évaluation ny dégat. Mbola mirindra tsara hatreo an.
Dia nandalo tany @ ilay garage ny expert (expert hono mantsy ny filaza ny olona manao constatation) hanao ny asany. Dia avy eo moa aho niantso an'ilay garage nanontany vaovao : hoy ry zareo tao hoe antsoy ilay expert fa misy zavatra tsy cohérent hitany hono.
Dia niantso an-dranamana (expert izy amin'io an) aho dia manomboka amin'izay ny tantara :
- Nanao ahoana ho'a ny valin'ny évaluation nataonareo ?
- Dia hoy lery hoe : Tena tsy mifanaraka amin'ny déclaration nataonareo hoy izy ny zavatra hitako
- Fa ahoana ho'a izany ?
- Ny seza hoy izy tsy d'origine, ny jiro tsy mifanaraka ny fil sady misy tranonkala ka tsy hay hoe ahoana no nahatonga an'ireo piesy ireo niala tao. Sady tsy misy facture hoy izy ilay izy.
- Nanomboka zendana aho teo sady miakatra ny feo : Efa ohatran'io ho'a no nividiananay azy ( marihana fa dokazy ilay izy) ka izaho ve ho'a handeha hividy dia handinika hoe d'origine ve zany seza zany ? Marihiko ho'a fa nisy contrôle technique ara-dalana io tamin'ny nividiananay azy.
- Ka tokony natao contrôle technique izany hoy izy , tsy conforme e, blablabla be teo
- Ka maninona ary ho'a ny assurance no nanaiky hanao contrat raha izany ? Ary ny fahalalako an'izany expert izany ho'a tokony hoe manao ny évalutation ny zavatra tokony soloina fa tsy lozana manisa ny tranonkala. Raha izany ho'a andeha mba hanao expert koa aho. sao dia heverinareo fa mahafinaritra ahy ary ho'a ny handeha hifanamerda sy handany andro hanao an'izao sy izao. Ohatran'ny heverinareo fa hoe izahay ho'a zany no migafy ny tomobil mba hahazoana remboursement.
- Ka izay hoy izy ny constatation fa anjaranareo sy ny assureur no mijery ny tohiny.
- ppfff notapahiko haingana moa ny tel fa mandreraka na ny miresaka @ lery aza.
Dia naharay ttsy avy @ ilay expert be teo omaly manamafy hoe tsy mifanaraka @ déclaration nataonareo ny constatation nataoko. Manana délai 15 jours nareo hanaovana contre-expertise fa nareo andefa no miantoka ny expert alainareo amin'izay ( 450 euros eo ho eo). Raha tsy misy valiny alohan'io dia raisiko toy ny foana ny déclaration nataonareo ary tsy manana droit @ remboursement ianareo.
Rehefa avy nijerijery forum etsy sy etsy dia efa fanaon-dry zalahy ilay izy. Ny cas-nay aza tsy dia pire loatra kanefa kosa ny zavatra tsapa dia mitovy ho an'ireo izay tratrany (leo, tofoka, romotra, ... tsy haiko ntsony). Raha fantatro mialoha izao zavatra izao dia naleoko izaho ihany no nanamboatra ny fiara. Ianao manao déclaration am-pahatsorana ary tsy mieritreritra ny hamely ny assurance fa kosa mba mitaky ny droit-nao ara-dalana (izay no handoavam-bola isam-bolana), ry zareo etsy an-daniny tena manalika sy manafitohana ary ataony mihitsy izay hahaela ny traitement ny dossier.
Fehiny : Na assurance tous risques aza dia tandremo fa ataon-dry zareo izay hialana pa (vakio tsara mihitsy ny contrat). Raha zavatra kely no voa, aleo tsy déclarer-na fa hamboarina fotsiny dia milamina na azo atao koa ny mifanafitohina amin-dry zalahy hatramin'ny farany miantso ny protection juridique fa ny olana amin'io maharitra ela (18 mois ) ny fiandrasana.
Fiainana — Nampidirin'i fraz @ 19:44
Raha sendra mahita an'ity i Hery Rakotomanantsoa na misy olona mahalala azy dia mba hiangaviana hametraka mail hahafahana mifandray aminy.
Mpiara-mianatra sy mpinamana ary samy mpilalao Echecs izahay. Nipetraka tao Anatihazo Isotry izy taloha fa izao tsy haiko intsony.
K7 tamin'ny androny
Fiainana — Nampidirin'i fraz @ 18:54
Efa lasa lavitra mihitsy moa izao ny teknolojia ankehitriny ary ireo mpanamboatra dia miezaka ny mba hanao zavatra mora ampiasaina sy tsotra be hatrany, lasa any indray manko izao no tian'ny olona.
Fa raha hiverenana kely ny andron'ny K7, indrindra ireo radio K7 misy azo hambara ihany :
- Voalohany aloha tsy tonga dia fantatrao avy hatrany na mivadika na tsia ny K7 ampidirina raha tsy hoe efa zatra mampiasa matetika. Madainga angamba izay miteny hoe tsy namadika K7 mihitsy tamin'ny nampiditra azy na amin'ny tranony io na amin'ilay fandefasana azy :-)
- Faharoa, ny K7 dia misy face anankiroa : A sy B no fiantso azy fa io koa dia tsapa vitan'akoho raha sendra hoe tsy misy soratra ka rehefa tsy face A izy izay dia face B...
- Fahatelo : Tsy afaka tonga dia hoe mihaino izay hira tianao avy hatrany ianao fa na manindry touche REW na FF. Raha misy hira fihainonao matetika izany dia ny hatevin'ilay bande fotsiny no atao répère hoe rehefa tatak'izao ny hateviny dia tokony mitontona eo @ ilay hira izay. Rehefa hianatra tononkira izany moa dia miasa matetika mihitsy ny touche STOP sy ny REW :-)
- Fahaefatra : Ny aza mba tapaka ny bande aloha fa tonga dia vita ny hira e. Azo hatohy amin'ny scotch ihany izy ka raha tsara vintana dia mba tsy heno ilay misaoty tampoka be.
- Fahadimy : Rehefa hanao enregistrement ianao dia tsy maintsy tsindriana miaraka tsara ny touche PLAY sy REC
- Fahaenina : Ny tena gravy dia ity. Indraindray moa rehefa mahita tournevis iny dia mba te hanokatra mba hijerena ny ao anatiny; mba hoe hanadio sy hanala kadradraka e :-) dia nisy karazana modely na radio K7 maromaro taloha ka rehefa voaala daholo ny vis rehetra dia mbola misy miraikitra ihany dia ny réaction hoe sintomina kely mafimafy dia mivaha; ary dia mivaha tokoa fa saingy tapaka avy hatrany ilay plastika kely fanaovana EJECT sy fanidiana azy iny dia eo no raisina fa lasa misanilanila tazomina amin'ny scotch sisa ilay fanidiana azy. Rehefa mamaha azy izany dia tsy maintsy avela hisokatra aloha (EJECT) izay vao sintomina. In-3 tratran'io aho fa tena fay !!!
Tamin'izany androny mantsy nalaza be ny K7, indrindra teo @ hotel de ville taloha teo ary isaky ny zoma dia misy nouveautés foana . Amin'izao moa dia efa any @ CD sy ny DVD indray no tena mandeha.